Shahaadada Tacliinta ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Dissertation-ka Tacliineed ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Dib-u-habeyn Lagu Sameeyay Shahaadada Aqoonta
Shahaadada waa nooc ka mid ah warqadaha tacliinta ee uu buuxiyo ardaygu uuna ansixiyo guddi akadeemiyadeed. Imtixaanka ugu dambeeya waxaa looga baahan yahay inay ku gudbaan dhammaan xubnaha guddiga.
Imtixaanka ugu dambeeya ayaa go'aamin doona haddii ardaygu runtii qoray qoraal ku saabsan mowduuca daraasadda. Mawduuca waa inuu taageeraa ilaha aasaasiga ah iyo kuwa sare oo waa inuusan horey u soo dhigin shaqooyin kale. Imtixaanka ugu dambeeya ayaa sidoo kale go'aamin doona haddii ardaygu u isticmaalay kaliya macluumaadka la xiriira waxbarashadiisa ama waxbarashadeeda. Tan waxaa ka mid ah dib u eegis dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan ilaha hore, iyo sidoo kale ardayga cilmi baaristiisa.
Qoraalka waxaa loo qori karaa laba siyaabood; ama adoo adeegsanaya qabyo-qoraalka koowaad, ama ku tafatirka qoraalkii asalka ahaa foom qabyo ah oo loo soo gudbiyo. Labada qoraalba waxaa looga baahan yahay inay ansixiyaan guddiga dib u eegista kuliyadda.
Haddii ardaygu awoodi kari waayey inuu qoro shahaado dartiis sababo la xiriira awood la'aan, isaga ama iyadu waxaa looga baahan doonaa inay soo gudbiyaan shahaado asal ah oo ku saleysan imtixaankiisa ugu dambeeya. Kadib ardaygu waa inuu mar labaad gala imtixaanka ugu dambeeya si uu u helo shahaado ama diblooma. In kasta oo ay suurtagal tahay in la soo gudbiyo shahaado aan la soo gudbin imtixaanka, tan laguma talinayo. Ardayga waxaa laga yaabaa inuu weli ku qasbanaado inuu dib u qaado imtixaanka ugu dambeeya si uu u dhammeeyo mashruuca.
Tifaftirka tafatirka iyo turjumida waxay sameyn kartaa adduunyo faraqa ugu jira tayada qoraalka. Tifatirayaasha badankood waxay ku shaqeeyaan akhrinta iyo tafatirka dhammaan qoraalada iyo qoraallada hoose ee qoraalka. Tifatiraha ayaa sidoo kale isbarbar dhigi doona qoraalka midba midka kale si loo hubiyo in xaqiiqooyinka ay sax yihiin. Tifaftirka waa in aan loo isticmaalin qaab dib-u-qorista qoraalka laakiin loo adeegsado hubinta in qoraalku uu raacayo xeerarka jaamacadda.
Tifatiraha ayaa sidoo kale eegi doona ardayga jirkiisa shaqadiisa si uu u arko noocyada dhibaatooyinka soo foodsaaray isaga ama iyada kahor. Tusaale ahaan, markii aad tafatir ku sameyneyso shahaado, midna maahan inuu saxo oo keliya waxa ku jira, laakiin sidoo kale qaabka. Ardaygu sidoo kale wuxuu mas'uul ka noqon doonaa inuu saxo dhammaan naxwaha iyo higgaadinta khaladaadka uu ku arko buuga. Waxa kale oo muhiim ah in la akhriyo oo la fahmo qoraalka iyo dhammaan tixraacyadiisa ka hor inta aan la tafatirin.
Tifatiraha ayaa sidoo kale weydiin doona ardayga magaciisa iyo cinwaankiisa si dukumiintiga ugu dambeeya si buuxda oo sax ah loogula hadlo ardayga. Markuu ardaygu soo gudbiyo shahaadada, waxaa dib loogu celin doonaa jaamacadda si dib loogu eego.
Waraaqaha tacliinta waxay leeyihiin heshiis weyn oo ku saabsan taariikhda iyo falsafadda jaamacadda lagu qoray. Sababtaas awgeed, tifaftirayaashu waxay ka taxaddari doonaan inay wax isbeddel ah ku sameeyaan shaqada iyaga oo aan oggolaansho ka helin borofisarka. Jaamacadu badanaa waxay weydiisan doontaa ardayga inuu dib u eego buugiisa ama qoraalkeeda kadib markuu soo gudbiyo.
Professor-ka ayaa laga yaabaa inuu ogolaansho u siiyo ardayga inuu qoro warqad uu ku codsado sixitaan. Si kastaba ha noqotee, borofisarku guud ahaan ma aqbali doono isbeddelka illaa warqadda ay ku jirto dhammaan caddaymaha taageeraya ee lagama maarmaanka ah. Marka laga soo tago saxitaanka qaladaadka iyo sixitaanka khaladaadka naxwaha iyo higgaadinta, ardaygu waa inuu sidoo kale saxaa wixii xigasho ah ee laga yaabo inuu iska indhatiray.
Ardaygu waa inuusan waligii ka waaban inuu weydiiyo su'aal ku saabsan buuggaagta wakhti kasta. Isaga ama iyadu waa inay sidoo kale dhiirrigeliyaan su'aalaha ka soo baxa dadka isla cilmiga soo bartay. Tani waxay ka caawin doontaa ardayga inuu helo faham wanaagsan oo ku saabsan waxa borofisarku isku dayayo inuu gudbiyo.
Kahor intaan wax isbadal ah lagu samayn tafatirka ardayga wuxuu ubaahanyahay inuu laxiriiro borofisarka kahor intaan wax isbadal ah la samayn. Aad ayey muhiim u tahay in ardaygu dareemo raaxo isbeddellada uu isagu / iyadu sameeyey. Tifatiraha ayaa sidoo kale u baahan doona inuu la kulmo ardayga kahor inta aan wax isbadal ah la samayn.
Dib-u-habeynta warqadda kama-dambaysta ah waa tallaabada ugu dambeysa ee hawsha ka hor intaan ardayga laga aqrin bujigiisa borofisar. Waa lagama maarmaan in ardaygu sameeyo sida ugu fiican ama kartideeda ah si uu u hubiyo inuu buuxiyey shuruudaha lagu qeexay tilmaamaha jaamacadda. Waxa kale oo aad muhiim u ah in buugaagta ardayga si fiican loo qoro oo si fiican loo baadho ka hor inta aan la gudbin.